လီဒိုလမ်းမကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လီဒိုလမ်းမကြီး
ဒုတိယကမာ္ဘစစ်အတွင်းက ကျော်ကြားခဲ့သော လီဒို-မြန်မာ လမ်းမကြီးမှာ ကမာ္ဘပေါ်တွင် ထူးခြားထင်ရှားတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ လီဒိုလမ်းမကြီးဟာ တစ်တောင်ဆစ်ချိုး အကွေ့ပေါင်း နှစ်ဆယ့်တစ်ကွေ့ ၊ ပေတစ်သောင်းကျော်နက်တဲ့ချောက်ကမ်းပါးတွေနဲ့ တောင်အသွယ်သွယ်ပေါ်မှာဖောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာ အမေရိကန်စစ်တပ်က ထရပ်ကားတွေက ဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် လက်နှက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေ၊ အစားအစာနဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းအမြောက်အများသယ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီ သမိုင်းဝင် လီဒိုလမ်းမကြီးက အန္ဒိယ ၊ မြန်မာ ၊ တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ် တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသောလမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်။
သေရှာကြည့်တာ ကားလေးတွေ သွးနေတာတွေ ့တယ်..
အေးလေနော် …ကြည့်ရတာ အသည်းယားထာ…. ဖြေးဖြေးချင်းမောင်းရမှာပဲနော်…….
ဟဲ့ဟဲ့ ဘိုက်ဘိုက်ကိုတော့ မမောင်းခိုင်းနဲ့နော် အဲ့ကောင်မက အချိန်တိုင်းမူးနေတာရယ်
စာရေးဆရာနာမည်မေ့နေလို့ဗျ….. “မဟာလီဒို” ဆိုတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော့်မှာရှိတယ်…..လီဒို လမ်းမကြီးဖေါက်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရေးထားတာလေ…. ဖက်လို့အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ….. နောက်နေ့ကျရင် စာရေးဆရာနာမည်နဲ့ ဒေါင်းလို့ရနိုင်မရနိုင် ….. ရနိုင်ရင်လည်း ဒေါင်းလို့ရမဲ့လင့်လေးကို ဒီ Post မှာပဲရေးတင်ပေးပါ့မယ်။
(ဖက်ရတာအရမ်းကောင်းလွန်းလို့ပါ………..ကျွန်တော်ဆိုဖက်တာ 10 ခေါက်လောက်ရှိမလားပဲ )
ရေးတာကတော့ ဖိုးကျော့ဗျ……ဒေါင်းလို့ရနိုင် မရနိုင် ရှာကြည့်လိုက်ဦးမယ်
ဟယ် လမ်းမကြီး ပုံ ကြည့်ပြီး ယားတာ ။ အသဲပြောပါတယ် ဟီဟိ
အမှတ်မမှားရင်.. မြန်မာပြည်ထဲ..ဂျပန်ဝင်လာတာ.. အဲဒီလမ်းမကြီးကြောင့်ပဲ..
ဦးအောင်ဆန်းသွားခေါ်တော့.. ဂျပန်တွေက.. ချိုင်းနားကိုထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့.. အဲဒီလမ်းကို.. ဖြတ်တောက်ချင်လို့.. သူတို့တွက်ကိန်းနဲ့..သူတို့.. ဦးအောင်ဆန်းကိုလက်ခံခဲ့တာလို့.. မှတ်ဖူးတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့.. ၂လလောက်က.. နယူးယောက်ဖက်က.. နာမယ်ကြီးမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာတယောက်ဖုန်းဆက်ပြီး.. အဲဒီလမ်းအကြောင်းကျုပ်ကို.. လာမေးတယ်..
ယူအက်စ်က.. စိတ်ဝင်စားနေတာ.. သေချာတယ်..
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က.. ထိုင်းနဲ့…မြန်မာဆက်တဲ့.. ရထားလမ်းတခုရှိခဲ့ဖူးတယ်..
လမ်းဖေါက်ရင်း.. မြန်မာတွေရော.. စစ်သုံ့ပန်းတွေရော.. သောင်းချီသေခဲ့လို့လေ…။
အဲ့ဒါကြီးကို ပြန်သုံးလို့ ရ/မရ .. စစ်နေကြပြီတဲ့ သူကြီးရေ့ …။
အဲဒီလမ်းကိုသာ.. ရှေးကျောက်မီးသွေးရထားနဲ့.. ရှေးအပြင်အဆင်တွဲနဲ့.. ပြန်မောင်းနိုင်အောင်လုပ်လိုက်ရင်.. ထိုင်းကိုတနှစ်ဝင်တဲ့.. တိုးရစ် ၁၂သန်းလောက်ရဲ့.. ၁ဝရာခိုင်နှုန်း… အဲဒီလမ်းကနေ.. .မြန်မာပြည်ထဲဝင်လာမယ်.. အာမခံကြောင်း…
တိုးရစ်တယောက် ဒေါ်လာ၁၀၀ဝ သုံးမယ်ဆိုရင်.. တနှစ်ဒေါ်လာ ၁ဘီလီယံ အပိုဝင်မှာဖြစ်ကြောင်း..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်ကတော့ ရောက်ဖူးတယ် ဟိုဘက် ချီဗွေ-လောက်ခေါ်အထိပေါ့
ဒီလမ်းကြီးက ဒီနေ့အထိ ကောင်းကောင်းမွန်ရှိနေသေးတာ အံ့ဩစရာပါ
အခုအချိန်မှာ အဲဒီလမ်းကို အသုံးပြုနေသေးသလား မသိဘူး။
ဓာတ်ပုံကြည့်ရတာတော့ ဟိုးတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ပုံထင်တယ်။
လေယာဉ်နဲ့ ရိုက်ထားတာလား မသိ။
ဒေးဗစ်ပြောတဲ့ “မဟာလီဒို” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
ဒေါင်းလို့ ရနိုင်ရင် လင့်ခ် ပေးပါဦး။
မရနိုင်ရင်လည်း ပြောလက်စနဲ့မို့ အားလုံးအတွက်
အလင်းဆက် တိမ်ယံသစ္စာကို တင်ပေးသလိုမျိုး
စတီးဝဲလ် လမ်းမကြီး သို ့မဟုတ် သံမဏိ ပိုး လမ်းမကြီး ဆီကို ရောက်ဖူးအောင် သွားပါမည်။